घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू फ्रेन्च फुटबल खेलाडीहरू एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य
एलबी पूर्ण फुटबल प्रतिभा को प्रस्तुत गर्दछ जसले सर्वोत्तम उपनाम द्वारा जान्छ; 'Le Petit Diable'। हाम्रो एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनल्टर्ड जीवनी तथ्य तपाईले आफ्नो बचपनको समय सम्म उल्लेखनीय घटनाहरु को पूरा खाता लाउनुहुन्छ। विश्लेषणमा प्रसिद्धि, पारिवारिक जीवन र उहाँका बारेमा धेरै साना ज्ञात तथ्यहरू अघि आफ्नो जीवन कथा समावेश गर्दछ।
हो, सबैले आफ्नो खेल बनाउने क्षमताको बारेमा जान्दछन् तर केवल केहि प्रशंसकहरूले एटोनाइन ग्रिजमनको जीवनी कथालाई सम्झाउँछन् जसले आफ्नो आमाबाबु, भाइ, बहिनी र जीवन शैली आदिबारे थप सिक्ने समावेश गर्दछ। पिच बाहिर उनको जीवन निकै रोचक छ। अब थप adieu बिना, सुरू गर्न दिन्छ।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बाल्यकाल
Antoine Griezmann बचपन Pic
एन्टोन ग्रिजमनको जन्म भएको थियो म्यान्को, फ्रेन्समा 21 मार्च को 1991 (पिता) र इसबेले गिरिजमन (आमा) द्वारा।
उहाँ फ्रान्समा एक राजनीतिक व्यक्ति हुनुहुन्छ एक धनी पिता जन्मेको थियो। तिनको बुबा एक नगर परिषदका पूर्व सदस्य थिए जो जवान एन्टोनलाई बच्चाको रूपमा आवश्यक सबै चीज खर्च गर्न पर्याप्त धनी थिए। तथापि, उनको माम अस्पताल क्लीनर थियो।
उनको फुटबल प्रवृत्ति उनको पोर्चुगल मूलको माध्यमबाट आयो। यो नोटमा उल्लेखनीय छ कि पोर्चुगलको रक्त एन्टोन ग्रिजमनको रिटहरूमार्फत चल्छ। एन्टोनको दादा अमर लोपस एक हल्कका केन्द्रीय डिफेंडर थियो जसले एक पटक पोर्चुगल टोलीलाई प्रतिनिधित्व गर्यो।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:फुटबलमा सुरू गर्नुहोस्
एक दादाजी जो एक फुटबलर थियो उनको खेल मा रूचि राखी। तथापि, एन्टोनको अन्तिम रुचि आउँदा उसले जेकिनेन जेडेनलाई मन पराउँथ्यो र थियरिरी हेनरी 1998 विश्व कपको दौडान। यसले तिनलाई निविदा उमेरमा फुटबल पूर्णरुपमा उत्प्रेरित गर्न उत्प्रेरित गऱ्यो र पछि, उनीहरूको सपना जडिबेन र दोहोर्याउँदा दोहोरो हेनरी फ्रान्सेली शर्टको साथ गर्नुभयो।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी
बच्चाहरु को रूप मा एक लियोन समर्थक को रूप मा ग्रिजमन को संधै क्षमता थियो। लियोनको माकनबाट जन्मे 70 किलोमिटर हुनुको अर्थ उनको युवा क्यारियरको लागि अवसर हो। उनी एकपटक एक जवानको रूपमा केटाकेटी क्लब लियोनमा परीक्षण गरेका थिए, तर उनीहरूको अकादमीमा भाग लिने र अस्वीकार गर्न निकै कमजोर थियो।
ग्रिजमनले आफ्नो गृहस्थ यात्राको यात्रा गरे र गृहनगर क्लब यूएफ मकानको लागि खेल खेल्न थाले। उनी त्यहाँ आफ्नो पिताको राजनीतिक प्रभावको कारण स्वीकार गरे। त्यहाँ त्यहाँ, उनीहरूले युवाहरूको एकेडमीहरूमा एक स्थान कमाउन अन्य व्यावसायिक क्लबहरूको साथ धेरै परीक्षणमा पुन: प्रयास गरे।
फेरि उनी खारेज गरे किनभने क्लबले उनको साइज र हल्का हल्का फ्रेमलाई प्रश्न गरे। एन्टोन ग्रिजमन उस समय उनको उमेरको लागि निकै सानो-ठुलो थियो। तपाईंसँग उनी फुटबल फुटबलको रूपमा ड्रेसिंग र आउटलुकको सबैभन्दा राम्रो थियो। यो थियो किनभने उहाँ एक धनी बच्चा हुनुहुन्थ्यो।
यंग एन्टोन ग्रिजमन
अन्ततः, एक सफलता युवा बालकको लागि आयो। 2005 मा, मन्टपेलीयरसँग परीक्षण गर्दा ग्रिजमनले पेरिसको पेरिस सेन्ट-जर्मेनको जवान एकेडेमीको विरुद्धमा मित्रतापूर्ण खेल खेलेका थिए र धेरै क्लबको स्काउट्स प्रभावित पारे। रियल सोसिडीड को लागि स्पेनिश क्लब को स्काउट, जसको कार्यक्रम मा भाग लिया। उनीहरूले अरू स्काउट्सको विपरीतमा अधिक चासो पाए। म्याच पछ्याउँदा उनले ट्राफिक जिते, क्लब क्लबका अधिकारीहरूले ग्रिजमनले सान सेबस्टन ट्रायल ग्राउन्डमा एक हप्ताको परीक्षण गरे।
एन्टोन ग्रिजमन लाइफ स्टोरी
उनको बारम्बार सफलताको लागि धन्यवाद, एन्टोन पछि क्लबमा दोस्रो-हप्ताको यात्राको प्रस्ताव गरिएको थियो। जब तिनीहरू भन्छन् कि उनी एक तारा बन्न सक्थे भने क्लबले आफ्ना आमाबाबुसँग सम्पर्क गरे र औपचारिक रूपमा एन्टोनलाई युवा अनुबंध प्रदान गरे। पहिलो पटक ग्रिजमनका आमाबाबुले बेटा स्पेनमा फर्कन थालेका थिए। धेरै अनुरोध पछि, तिनीहरूले उनलाई कदम बनाउन अनुमति दिए। यो सकारात्मक आश्वासन पछि आयो।
जब उनले पहिलोपटक रियल सोसिडेडमा प्रवेश गरे, ग्रिजमनले त्यही क्लबको फ्रान्सेली स्काउटको घरमा प्रवेश गरे जुन उनलाई फ्रान्समा राखे। उहाँ आफ्ना घर सुरक्षित गर्न मोनिज थिए, तर एक्लै बस्न धेरै जवान हुनुहुन्थ्यो। उनले बेईननीमा सीमा पार गरेको स्कूलमा पनि भाग लिइन्। उहाँ क्लबको मुख्यालयमा अझ बढी प्रशिक्षण लिनुहुन्छ। यसले एन्टोनलाई हेर्दा अघि समय लागेन भने उनीहरूले साना साना केटाकेटीलाई एक बनाइएका किशोरहरूलाई विकसित गरेका थिए।
एन्टोन ग्रिजमन युवा क्यारियर
तथापि, यो उनलाई वास्तविक सोसाइडडको पहिलो टोलीमा तोडिने समय लागे। यो चार वर्ष पछि आउँथ्यो क्लबको युवा प्रणाली।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सफलता
ग्रीष्मकालीन 2014 मा, ग्रिजमन एटलेटि मैड्रिडमा लियो। जुलाई 28 को 2014th मा ठीक मा, Atletico मैड्रिड ग्रिजमैनको स्थानान्तरणको लागि रियल सोसिडियडको साथमा एक सम्झौतामा पुग्यो, को लागी एक महिनाको लागी उसको लागी लाग्न सक्छ €30 मिलियन (£24 मिलियन) खरीद-आउट खण्ड।
उहाँले एकैचोटि मेडिकल परीक्षा पास गर्नुभयो र 29 जुलाई, 2014 मा एक 6-वर्ष अनुबंध हस्ताक्षर गरे। उहाँ थिए ला लीग प्लेयरको महिनाको अटेलिकोको पाँचवटा म्याचमा मात्र तीन को बावजुद जनवरी 2015 को लागी। त्यो समान 2015, त्यो सी ए रोनाल्डो र लियोनेल मेस्सी संग LFP पुरस्कार मा वर्ष को टीम मा केवल एटीएम प्लेयर र तीन मध्ये एक को रूप मा चयन गरियो। तब देखि, उनको प्रभुत्व को असाधारण असाधारण छ। बाँकी रहेका उनीहरूको इतिहास इतिहास हो।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:पारिवारिक जीवन
फेथर: उनको पिता अलेन, जो एक नगर परिषद थियो, अल्स्सियन जाति को हो। यो कसरी उनको जर्मन उपनाम आयो?
एन्टोन ग्रिजमन आमाबाबु - अलेन र इइसबेले
मातृभाषा: उनको आमा इइसबेले (माथि चित्रित) पूर्व अस्पताल क्लीनर थियो। त्यो पहिले नै उल्लेख गरिएको जस्तो पोर्चुगल उत्पत्तिको हो। उनको पिता अमारो लोपेज एफसी पाकस डे फ्रेरेरा को लागि एक पुर्तगाली फुटबलर थिए।
अमारो लोपेज 1957 मा निर्माण मा काम गर्न आफ्नो पत्नी केरोलिना संग फ्रान्स आइपुग्यो। फ्रान्समा एन्टिनेको आमा इइसबेले जन्मेको थियो। उनको बुबाले आफ्नो पोते बच्चा जन्माएपछि मरे। बच्चाको रूपमा, ग्रिजमनले प्राय: आफ्ना छुट्टिहरू पाकोस डे फ्रेरामा बिताए। यो ठाँउमा फुटबल छ। क्यारियरको रूपमा।
सिस्टर: Antione Griezmann को बहन को नाम Maude छ। उनी नोभेम्बर 2015 पेरिस आक्रमणमा बेटकाल थियेटरको घेराबन्दीको बचेको थिए, जुन उनी जर्मनीको स्टडेडे फ्रान्समा खेलिरहेका थिए। वर्तमानमा, उनी हालको छवि अधिकार प्रबन्धक हुन्।
एन्टोन ग्रिजमनको बहिनी मेड
भाइरस: Antione को यो नाउँ नामक जवान भाई छ। थियो स्पोर्टिङ म्याकोनको पोर्चुगल फुटबल क्लब (लिखित समयको रूपमा) सँग एक पेशेवर फुटबल खेलाडी पनि हो।
युवा एटोटोन ग्रिजमन र बच्चा भाइ- थियो
थियो ठूलो भयो। यो एक प्रमाण हो कि Antione एक पल्ट बच्चा को रूप मा विकास को मुद्दाहरु थियो। यही कारणले उनीहरूलाई एकपटक युवा क्लबहरू द्वारा खारेज गरिएको थियो।
एन्टोन ग्रिजमन र भाइ
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:सम्बन्ध जीवन
जूनमा, 2017, एन्टोनले आफ्नो लामो समयको प्यारी एरिका चोपनेनालाई विवाह गरे। उनीहरूले के मान्छे 'गुप्त विवाह' लाई बोलाएको थियो। केवल उनको नजिकका साथी र परिवारलाई आमन्त्रित गरियो। स्ट्राइकर र उनको नयाँ श्रीमतीले अचम्मको कुरामा खिचेका थिए जब उनी उनीहरूको विवाहको फोटो जारी गरे।
उनले Instagram तस्वीर आनन्दित पारे: "क्यामिनो लेनो डे फेलिसिडीड", जो लगभग मा अनुवाद हुन्छ 'खुसीको बाटो'.
एन्टोन ग्रिजमन बुध ईरिका
एकअर्कालाई, तिनीहरूले धेरै सुन्दर प्रतिज्ञा गरेका छन्। यदि उनी सेलफोन थिए, वास्तवमा, एन्टोन चार्जर हुन चाहानुहुन्छ। सबैलाई थाहा थियो कि उनी विवादास्पद विवादास्पद हुन सक्थे। यो पास भयो।
एन्टोन ग्रिजमन लाइट स्टोरी एरिका
विवाह गर्नुभन्दा पहिले ग्रिजमन र तिनकी श्रीमती एक छोरा थिए। एक छोरी जसले मिया ग्रिजमन नाम गरे। आदर्श रूप मा, एन्टोन एक निजी जीवन र नापसंद छ कि उनको छोरी को चेहरा मीडिया को सामने प्रकट भएको छ।
एन्टोन ग्रिजमन बेटी-मिया
एन्टोन ग्रिजमनले एक पटक प्यान्ट 520 राम्रो र एक चेतावनी पाएको छ ... स्कोरिंग पछि आफ्नो पत्नीको जन्मदिन मनाउनको लागि। वलिसिनियामा आफ्नो साइडको 3-0 विजयमा स्कोर गरे पछि उनले एक पटक एक शर्टलाई आफ्नो पत्नीलाई हस्तलेखन सन्देशको साथ दिए: "फेलिज कमिपे गोर्डिटा"वा "शुभ जन्मदिन मुबारक"।
जबकि एरिका शायद ग्रिजमन देखि स्नेह को एक मीठा प्रदर्शन संग प्रसन्न भए, स्पेनिश एफएए त्यो मजेदार नहीं पाया। उनले तुरुन्तै राम्रो काम गरे र आफ्नो जीवनको प्रेमलाई आफ्नै शैलीमा मनाउन थाले।
एंटोन ग्रिजमन र उनको जीवनको प्रेम
यसबाहेक, एन्टोनले जस्तै ईमानदार सम्बन्ध सञ्चालन गर्दछ रबर्ट लुवेन्डोस्की, रोबर्टो फर्मिनो र जुआन मटा.
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:कपाल शैली र टटुट तथ्यहरू
यद्यपि, ग्रिजमनको चौंरी कपालले प्रभाव दिन्छ कि त्यो अत्यन्त स्टाइलिश छ र पार्टीको जीवनशैली हो।
उनको टैटूले फरक विचार दिन्छ। फ्रांसीसी मानिससँग धर्मसँग सम्बन्धित थुप्रै टोटोटोहरू छन्।
एंटोन ग्रिजमन तथ्य - टैटू
उहाँको माथिल्लो हातमा येशूका चित्र हो, जबकि उनको निचो हातले बादल र ताराहरूसँग एक रोशनी देखाउँछ।
उहाँका आमाबाबुको सुरुवात उहाँमा टटाइएको छ। एन्टोन एक व्यक्ति होइन जुन आफ्नो शरीरलाई कुनै कारण बिना मानेको छ। उहाँ अत्यन्तै धार्मिक हुनुहुन्छ र तिनको टैटू सबैको प्रमाण हुन्।
एन्टोन ग्रिजमन बचपन स्टोरी प्लस अनर्थ जीवनी तथ्य:बिग बान
एन्टोन ग्रिजमन एक पटक एक बर्ष भन्दा बढी समय फ्रान्सेली राष्ट्रिय टोली को प्रतिनिधित्व गरेर निलम्बन गरिएको छ।
एन्टोन ग्रिजमन तथ्य - द बिग ब्यान
यो घटना एक घटनाको सन्दर्भमा थियो जुन ग्रिजमन र तिनका केही साथीहरू पेरिस नाइट क्लबमा थिए जब उनीहरूले उत्तरको उत्तरमा प्रशिक्षण केन्द्रमा रहेका टोलीका बाँकी रहेका थिए।